02/05/2018 - Page 3 sur 3 -
Faritra Analamanga : Nanolotra fanampiana ho an’ny klioba basikety N1B
Mitohy hatrany ny asa sosialy ataon’ny Faritra Analamanga. Araka izany, notanterahina ny alatsinainy 30 avrily teo, tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina ny lanonana fanolorana fanampiana ireo klioba tsy ankanavaka mandray anjara amin’ny fiadiana ny tompondakan’i …Tohiny
Anisan’ireo mioty hatrany ny vokatry ny korotana ataon’ny mpanao politika. Manoloana ny zava-misy, amin’ny fanakorotanana tarihin’ireo solombavambahoaka dia nivoaka tamin’ny fahanginany, ary naneho ny heviny ireo fikambanan’ny mpianatra eny amin’ny oniversitén’Antananarivo izay tsy manaiky intsony …Tohiny
Fanomezana maha-po, izay no azo ilazana ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina manoloana ny fahatongavan’ny fetin’ ny asa omaly, fisondrotan’ny karaman’ ny mpiasam-panjakana ho 8 % no nitsena ireo mpiasam-panjakana rehetra. “Noho izany, ny mari-karama …Tohiny
«Sarotra tiavina !»
Nisy mpamaky gazety nandefa sms taty amin’ny biraon’ny Triatra omaly, naneho ny heviny sy alahelony ihany koa manoloana ny zava-misy amin’izao fotoana. Tahaka izao no voasoratra tao anatin’izany sms izany: «…tena mba tsy rariny kosa …Tohiny